Global Voices Advocacy : Mampiroborobo Ny Zon’ny Mpiserasera Eo Amin’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2013 17:23 GMT
Tamin'ity herinandro ity, manampahaizana an-jatony momba ny teknolojia sy ny politikan'ny aterineto no nihaona tao Paris nandritra ny Vovonana Iraisam-pirenena momba ny Sehatry ny Fampahalalam-baovao (société de l’information) (SMSI) mba hiadihevitra sy hiresaka lohahevitra tena maika mifandraika amin'ny politikan'ny Aterineto. Manamarika ny faha-10 taona nitsingerenan'ny fizotry ny hetsika tamin'ny alalan'ireo karazana sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana miara-miasa amin'ireo mpisehatra ara-indostria, ny governemanta, ny fiarahamonim-pirenena ny kaonferansa mba hamaritana tanjona ho fampandrosoana ny Teknolojian'ny Fampitam-baovao sy ny Fifandraisana (TIC) ary ny fitantanana ny aterineto.
Saritany mampiseho ny fampiasana aterineto manerantany avy amin'i Joana Breidenbach. Nahazoan-dalana.
Ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny Fifandraisana (UIT), zana-tsampan'ny Firenena Mikambana no nitarika voalohany ny fizotry ny SMIS, izay niteraka adihevitra be nandritra ny kaonferansa farany, tamin'ny volana desambra, satria governemanta marobe no nanolotra fepetra momba ny fiarovana sy ny fidirana amin'ny aterineto izay mety handrahona tanteraka ny fahalalaham-pitenenana sy ny fiainan'olona manokana amin'ny aterineto. Na dia mbola tsy nampiharina aza ireo tolo-kevitra tsy azo ekena indrindra ireo, mbola miahiahy manoloana ny fikasan'ireo Firenena mpikambana sasany ao amin'ny UIT ireo mpiaro ny fahalalahan'ny aterineto. Mazava ho azy ankehitriny fa sokajian'ireo governemanta sasany ho toerana sahaza hametrahana fitsipika iraisam-pirenena hamehezana ny aterineto ny UIT mba hahafahan'ny governemanta mamehy tanteraka ny zon'ny mpampiasa aterineto.
Tale mpanatanteraka ao amin'ny ICANN, Fadi Chehade nikabary nandritra ny lanonana fanokafana ny WCIT 2012, nahazoan-dalana avy amin'ny itupictures tao amin'ny Flickr ny sary.
Tsy tahaka ny kaonferansa tamin'ny volana desambra, izay tsy azo natrehan'ny olona marobe, fa voafetra ny fandraisan'anjaran'ireo vondrona fiarahamonim-pirenena, nisokatra ho an'ireo mpisehatra rehetra kosa ny SMIS tamin'ity indray mitoraka ity. Nandray anjara tamin'izany ny Global Voices Advocacy: Hisham Almiraat: talen'ny GVA, sy i Ellery Robearyrts Biddle, tonian-dahatsoratra ao amin'ny GVA ary i Oiwan Lam, tonian-dahatsoratra avy ao amin'ny faritra Azia Avaratra-Atsinanana izay handray anjara amin'ny kaonferansa. Mampanantena izahay fa hanolotra ny vinavina momba ireo fanamby politika mikasika ny bilaogera, ny mpisera Twitter ary ny mpikatroka antserasera.
Tsy raisinay ho toy ny kaoferansa tsotra fotsiny ity fihaonana ity. Mihevitra izahay fa hitondra ny anjara birikinay amin'ny fandraisana anjara amin'ity kaonferansa SMIS ity mba hiarovana ny tombotsoan'ireo mpisehatra rehetra manana andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny aterineto, anisan'izany ireo mpiserasera. Raha manipika matetika ireo mpanapa-kevitra fa zava-dehibe ny fandraisan'anjaran'ireo olom-pirenena sy mpiserasera amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fitantanana ny aterineto, mbola tsy misy ny fandraisana anjara ho an'ny fiarahamoninam-pirenena. Angamba mety tsy ao an-tsain'ireo sasany mihitsy ny tombotsoan'ny mpiserasera, ny sasany kosa mety mana-piniavana te-hampiditra ireo mpiserasera handray anjara amin'ny fanapaha-kevitra, tsy mora anefa ny manatanteraka izany. Ahoana no fomba handinihana ireo hevitra maro samihafa sy hijerena azy na hanatsofohana azy amin'ny famolavolana politika?
Mihevitra izahay fa sahaza tanteraka amin'ny fanangonana izany karazam-baovao izany ny tambajotra Global Voices. Amin'ny maha-tambajotra iraisam-pirenena azy, manana fahaizana momba ny aterineto ary mahara-baovao tsara momba ny olana ara-politikan'ny aterineto ny mpikambana ao aminy, ireo bilaogera sy olo-tsotra mpanao gazety. Ny fanantenanay amin'ity kaonferasana ity sy ho amin'ny hoavin'ny asantsika dia ny hahitana fomba hahafahana mandray anjara maneho hevitra izay hisy fiantraikany tsara eo amintsika. Voninahitra ho anay ny fandraisana anjara amin'ny SMIS ary vonona hiaro ny tombotsoan'ny fiarahamonintsika sy ny mpiserasera aterineto manerantany izahay. Entaninay ianao haneho hevitra eto ambany mba hampahafantatranay ny hevitrareo na ny ahiahinareo mikasika ny olana ara-pitsipika momba ny aterineto. Hiezaka izahay hizara izany mandritra ny SMIS.